सिमास्तम्व नेपालले बनायाे भारतले कहिले त? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home समाचार सिमास्तम्व नेपालले बनायाे भारतले कहिले त?
सिमास्तम्व नेपालले बनायाे भारतले कहिले त?
२७जेठ, काठमाडौं । नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण ३ नम्बर नापी टोलीले रुपन्देहीदेखि दाङका तीन सय ११ वटा सीमास्तम्भ मर्मत एवं पुनर्निर्माण गरेको छ ।
१३ वटा जोर नम्बरमा पिलर नयाँ बनाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । उक्त पिलर निर्माण गर्ने काम भारतीय पक्षको जिम्मामा परेको छ । आजको
टोलीले हालै रुपन्देहीमा एक र कपिलबस्तुमा १२ वटा नयाँ पिलर निर्माण गरेको छ । जसमा ठूला ३ र माइनर १० वटा बिजोर नम्बरमा पिलर नयाँ बनाएको नापी विभागमा उपसचिव एवं सर्वेक्षण टोली प्रमुख निर्मल अचार्यले जानकारी दिए ।
भारतीय पक्षले यस क्षेत्रमा रहेका जंगी सीमास्तम्भ १३ वटा स्तम्भ मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरेको छैन ।
नेपाली पक्षले कपिलवस्तुको चाकचौडानजिक रहकेो ५५२ भिल्मीको पिलर र ५६५, ५७७ नम्बरका पिलर भने मर्मत गरेको छ ।